Manjaro 0.8.5 inowanikwa | Kubva kuLinux
Manjaro 0.8.5 inowanikwa
Mushure memavhiki akati wandei ekuvandudza kwakasimba, vhezheni 0.8.5 yakaburitswa, iyo inosanganisira dzinoverengeka dzekuvandudza kwakakosha.
Shanduko dzakanyanya kukosha kana dzichienzaniswa neshanduro yapfuura:
Mutsva graphical installer
Nyowani Manjaro Zvirongwa Center
Iyo Pamac package maneja yakagadziridzwa zvachose
LXDM / Slim semaneja wekuratidzira
Proprietary mutyairi rutsigiro rwe AMD neNvidia mifananidzo yemakadhi
Kuwedzera multimedia rutsigiro (Qupzilla, Pamac, VLC, uye XNoise), mamwe mashandisirwo uye mukana weAUR nekumira.
Kuti uwane rumwe ruzivo, ini ndinokurudzira kuverenga iyo kusunungura manotsi inowanikwa pane Manjaro blog.
Dhawunirodha Manjaro 0.8.5
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Manjaro 0.8.5 inowanikwa
Ariel chiaramello akadaro
Ndine iyo yapfuura vhezheni (iyo ini handirangariri nhamba) yakaiswa mutsamba yangu… zvakafanira here kuisa iyi vhezheni kana neazvino masystem sisitimu, ingatove iine izvo zvitsva maficha? - Ndatenda
Pindura kuna Ariel Chiaramello
Chaizvoizvo, zviri nani zvirinani kune mushandisi pane Arch nekuti haimhanye mukuchinja zvakanyanya.
Iine zvinyorwa zvine mazita akasiyana, asi iine iwo mapakeji akafanana neArch repos, anotsigirwa zvizere
Hapana chikonzero, iri Rolling Kuburitswa
Chinja OS akadaro
Ino distro inogovera marekodhi neArch kana zvinoitika senge mune chakra?
Pindura Shanduko OS
Nyore wifi yekubatanidza muArch linux
Dhawunirodha Line Android